Gbasara Anyị - Anping Zhuona Waya ntupu Co., Ltd.
Anping Zhuona Waya ntupu Co., Ltd.
anyị na-agba mbọ iji na-enye elu-oru oma nzacha
AHT / Anping Zhuona Waya ntupu Co., Ltd. bụ ọkachamara emeputa site emebe, nnyocha na mmepụta nke dị iche iche ulo oru nyo ọcha na iyo ngwaahịa. Isi ngwaahịa na-agụnye Sintered waya ntupu, Sintered chere, Pleated nyo mmewere, Sintered nyo mmewere, nkpirikpi nyo mmewere, Leaf diski nyo, Proclean nyo, Myọcha katrij, Rimed nyo discs na ndị ọzọ nyo ngwaahịa. Ngwaahịa na-ọtụtụ-eji mmanụ ala, chemical ụlọ ọrụ, na-emepụta ọgwụ ụlọ ọrụ, chemical eriri, aerospace na ụgbọelu, nkà mmụta banyere ígwè, mmiri ọgwụgwọ, nri na onunu, coal chemical ụlọ ọrụ, ụgbọala iyuzucha ọgwụgwọ na ndị ọzọ ubi na ụlọ ọrụ.
Zhuona nwere ọkachamara R & D otu, na ọhụrụ na mmepe, anyị na-agba mbọ iji nye elu-oru oma nzacha, elu-edu nzacha na elu-ọgwụgwụ nzacha ngwaahịa ahịa anyị. Site imewe, nnyocha na mmepụta, anyị anọwo na-agbalị kasị mma anyị na-ezute onye imewe na ikike chọrọ nke ndị ahịa, na-enye ndị ahịa anyị a pụrụ ịdabere na nzacha ngwọta.
N'otu oge, Zhuona nwere a nditịm àgwà akara usoro, nke na-enyere anyị ụlọ ọrụ ịnọgide na-enwe a na-eduga ọnọdụ na ngwaahịa mma na ọrụ mpi. Ugbu a, anyị ụlọ ọrụ nwere elu agụụ sintering ngwá, elu-arụmọrụ agụụ electron doo ịgbado ọkụ igwe, kpọmkwem na zuru ezu ule ngwá, nke nwere ike onwe ha mezue imewe na mmepụta nke nyo ihe na nyo; ma mezue dị iche iche nyo ihe na ọmụmụ ịdị ọcha mkpebi siri ike na mmetọ analysis; mezue nile di iche iche nke nyo arụmọrụ nchọpụta, na-enye a pụrụ ịdabere na nkwa maka ọhụrụ ngwaahịa 'nnyocha na mmepe.
Zhuona nwere a nditịm àgwà akara usoro, nke na-enyere anyị ụlọ ọrụ ịnọgide na-enwe a na-eduga ọnọdụ na ngwaahịa mma na ọrụ mpi.
- anyị na-agba mbọ iji nye elu-oru oma nzacha.
Igwe anaghị agba nchara Myọcha, Air Nzacha, Automotive Myọcha, Igwe anaghị agba nchara ikuku filtration, Ihe nzacha mmiri, Ọrụ gas gasị,